(Deg Deg) Farmaajo & kooxdiisa oo Dhuusamareeb ka soo saartay nooc doorasho | SMC
Home WARARKA MAANTA (Deg Deg) Farmaajo & kooxdiisa oo Dhuusamareeb ka soo saartay nooc doorasho
(Deg Deg) Farmaajo & kooxdiisa oo Dhuusamareeb ka soo saartay nooc doorasho
MW Farmaajo & Hoggaanka Dowlad Goboleedyada Galmudug, Hirshabelle, Koofur Galbeed & Banaadir aya soo saaray nooc doorasho ee dalka lagu wado in ay ka dhacdo,.
Xalimo Ismaaciil (Xaliimo Yareey) Ayaa looga dhigay in ay madax ka noqoto doorashooyinka, waxaana ay noqoneysa nooca doorasho dadban oo ka duwan tii 2016.
Waxaa lagu heshiiyay:
In qaabka doorashada 2020/21 noqoto mid deegaan Doorasho ah (Electoral constitiuency caucuses)
In Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka-GMDQ oo kaashanaya Maamulada Dowlad Goboleedyada fududeeyaan dhisida Guddi xulis oo loo dhan yahay oo ka kala imanaya odayaasha iyo bulshada rayidka ah ee ka soo jeeda beesha kursiga.
In Ergada kursi kasta noqoto 301 oo ka imanaysa beesha kursiga wadaagta
In Dowlad Goboleed kasta laga asteey ugu yaraan afar (4) deegaan doorsha oo ay ka dhacdo doorasho
In codbixiyeyaasha 3dii ilaa 5tii kursi ee hal goob doorasho wada yaala la isku dhafo kadibna si wadajir ah ugu codeeyaan dhamaan musharaxiinta xisbiyada ee ku tartamaya kursiga.
In doorashadu kawada dhacdo dalka oo dhan hal mnaalin oo isku nid ah.
Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka-GMDQ waxay kuraasta lagu asteeyay deegaan doorashooyin aan amni ahayn u wareejin karaan deegaan doorasho kale oo amni ah.
In qorsheynta iyo fulinta doorashada looga danbeeyo Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyagoo kaashanaya Maamulka dowlad goboleedyada iyo Bulshada rayidka ah.
In doorashada lagu galo hannaanka xisbiyada badan
In Baarlamaanka Dowld Goboleedyada ay soo doortaan Aqalka Sare.
In heshiiskan loo gudbiyo Golaha Shacabka si uu sharci u noqdo
Si doorashada wakhtigeeda ugu dhaco waxaa la go’aamiyaye in GMDQ dardargaliso hirgelinta doorashada
Madaxda shirka waxa ka go’an in ay sii wadaan dadaalka xal u helida tabashooyinka ku aadan arrimaha doorashooyinka 2020/21 ee ay qabaan labada dowlad goboleed ee shirka ka maqan, waxaana rajeyneynaa in ay nagula soo biiraan wixii howl ah ee dhiman.
In la ilaaliyo 30% ka saamiga Haweenka
Wuxuu shirku u mahad celin iyo bogaadin u jeedinaya Madaxweynaha iyo shacbiga Galmudug soo dhaweynta iyo martigelinta shirka
Sdioo kale shirku wuxuu u nmahad celinayaa beesha caalamka oo mar walba dadka soonaaliyeed lagarab taagan taageero dhan walba ah.
Previous articleQaramada Midoobey oo ku baaqday Puntland iyo Jubbaland in ay taggaan Shirka Dhuusamareeb
Next articleMareykanka oo digniin culus u diray ‘qas-wadayaasha’ diiday shirka Dhuusmareb 3